Ozi Google ga - egosiputa izo ya ezo maka njedebe RCS | Gam akporosis
Google akwalitela Izi ozi RCS ruo oge ụfọdụ iji nwee ike ịla ezumike nká SMS ma merie ngwa ngwa ngwa dịka WhatsApp, Telegram na ngwaọrụ ndị ọzọ. Mgbe ọnwa ole na ole chere, ụlọ ọrụ Mountain View na-ekwupụta ọbịbịa nke Izuzo na njedebe.
Maka nke a, ndị mmepe na-arụ ọrụ ezoro ezo arụ ọrụ ogologo oge tupu ha ebupụta ya, ebe ọ bụ na ule ahụ gara nke ọma mgbe emechara ọtụtụ. Nke a ga - enyere gị aka ịnọ n’udo ma tinye onwe gị n’udo na ngwa ngwa ngwa eji ewu ewu.
1 Odikwa na ozi RCS
2 Soro ndị isi ozi ga-asọ mpi
Odikwa na ozi RCS
Na nsụgharị dị n'ime nke Ngwa 6.2 egosiputa nkwusi nzuzo ngwụcha na njedebe a makwaara na ọ ga-erute ozi RCS n'ụzọ pụrụ iche. Ya mere, izo ya ezo agaghị eru SMS na MMS, ihe Google n'onwe ya egosighi na nkwupụta ewepụtara na blọgụ gọọmentị ya.
Maka nke a iji rụọ ọrụ ịkwesịrị iji Ozi Google, ọ dị mkpa ịmata nke a mgbe ngwa a anọghị na ezoro ezo n'oge a. Samsung na Huawei n'aka nke ọzọ nwere nkwado ụmụ amaala na ozi RCS, ọ bụ ezie na ha agaghị enwe ike iji ihe nzuzo a ma ọ dịkarịa ala site na mmalite.
Maka oge ahụ ọgwụgwụ-na-ọgwụgwụ izo ya ezo abata na beta tozuru oke, mana ọ ka ga-ahụ ma ọ bụrụ na nsụgharị ikpeazụ abịarute ọnwa ole na ole sochirinụ. Ndị ọrụ Google Fi ga-enwe ike ịbanye ma nwee ike ịnweta oku, SMS ma ọ bụ ozi olu na-enweghị mkpa ka ekwentị gbanye.
Soro ndị isi ozi ga-asọ mpi
Ozi Google anọwo n'azụ Telegram na WhatsApp maka izo ya ezo na njedebe, Oge eruola ka anyị nwee udo ma tụlee na iji ngwa ọrụ a gụnyere na ọnụ ga-eji ọtụtụ ihe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ozi Google ga - egosiputa ihe ezoro ezo na njedebe maka izipu ozi RCS